Akhriso su’aalo iyo jawaabo: Wakiilka QM ee Soomaaliya oo ka su’aalo laga waydiiyay arimaha Doorashooyinka Soomaaliya | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Akhriso su’aalo iyo jawaabo: Wakiilka QM ee Soomaaliya oo ka su’aalo laga...
Akhriso su’aalo iyo jawaabo: Wakiilka QM ee Soomaaliya oo ka su’aalo laga waydiiyay arimaha Doorashooyinka Soomaaliya
Axad -XT– MUQDISHO, Soomaaliya
Waa maxay muhiimadda caleema saarka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya?
Kani waa Golaha shacabka. Waxaa xildhibaanada doortay in ka badan 14 kun oo qof. Baarlamaankii 2012ka waxaa 275ta xildhibaan soo xulay rag130 oday dhaqameed ah balse hadda waxaa doorashada ka qayb galay dad aad u badan oo ay ku jiraan haween iyo dhalinyaro aad u badan Waa arrinka 2aadee da’da xildhibaanada oo in ka badan kala bar boqolkiiba waxa ay ka yaryihiin 50 jir oo u dhigan 2 xildhibaanba mid in uu ka yar yahay 50 sano jir, iyadoo boqolkiiba 14 xildhibaanada da’dooda ay ka yar tahay 35 sano jir oo ah 7 xildhibaanba in mid uu 35 sano jir ka yar yahay boqolkiiba 24na waa haween in ka badan 45 ama 50 boqolkiiba waa xildhibaano cusub tan 3aadna waa in baarlamaanka ay matalaad ku leeyihin xubnaha federaalka ah oo waxaa jira aqal sare in kastoo weli aan la garaneyna xiriirka kala dhaxeyn doona golaha shacabka iyo qaabka shaqadiisa dabcan waxaa jira qodobo ku qoran dastuurka balse waxaa loo baahan yahay la dhaqan galiyo. Markaad si walba u eegtana baarlamaanka waa uu ka duwan yahay kuwii hore
S- Maadaama hadda doorka Madasha Hoggaanka Qaranka la soo gabagabeeyey oo baarlamaanka cusub la dhaariyey Sideed u aragtaa in horusocodka hannaanka doorashada ee afhayeenka baarlamaanka iyo madaxweynaha?
J-Waxaa jira qaabab loo maareyn doono dabcan baarlamaankaan waxaa ka horreeyey 9 baarlamaan ooh ore balse hadda sida aan kuu sheegay waxaa jira aqalka sare oo isbadalkiisa wata. Marka xubnaha ugu da’da weyn ayaa guddoomin doono oo la shaqeyn doono howl-wadeenaga iyo xoghayaha guud ee baarlamaanka waxay ila tahay waxaa la dooranayo guddoomiyaha baarlamaanka golaha shacabka iyo ku xigeenadiisa oo dad badan isku soo taagan doonaan qabashada xilkaas.
Aqalka sare weli horey looma qaban balse marka Soomaaliland ay soo dhameystiraan doorashada xubnaha aqalka sare waxaan arki doonaa hannaank xoogaa yara fudud kan golaha shacabka maadaama aqalka sare uu ka kooban 54 xubnood kadibna guddoomiyaha aqalka sare iyo ku xigeenadiisa, marka intaas ay dhamaato waxaan rajeynayaa in aan si degdeg ah u aragno hannaanka doorashada madaxweynaha.
Sida cad musharaxiinta waa ay ku dhawaaqaan musharaxnimadooda, bixiyaan lacagaha qidmadda ah, kadibna ay helaan fursad ay uga dhax ola-oleeyaan xildhibaanada.
Muxuu noqon doonaa xiriirka ka dhaxeeya baarlamaanka federaalka ah iyo Madasha Hoggaanka Qaranka?
J-Farqiga weyn ee Baarlamaankaan la imaanyo waa jiritaaanka aqalka sare dabcan golaha Shacabka waxaa lagu doortay nidaamka 4.5 balse aqalka sare waxa uu matalayaa dowlad goboleedyada taasoo macna ahaan ka dhigeyso in uu ciyaarayo door qaran oo go’aan gaaris qaran ciyaari doono. Marka ay timaado go’aan gaarista qaran waa aqalka sare hay’adda dowladeed ee ciyaari karo.
Aqalka sare la’aan Madasha hoggaanka Qaran oo ka kooban 7 am 8 hoggaamiye siyasadeed oo ay ka mid yihiin madaxda dowlad goboleedyada, ra’isal wasaaraha, ra’isal wasaare ku xigeenka, guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha. Taas waxa ay keentay in ay door muhiim ah ciyaaraan 18jkii bil ee la soo dhaafay waxaan go’aamada siyaasadeed ee ay qaateen ka mid ah hannaanka doorashada sida amniga, dhaqaalah, iyo qaybsiga kheyraadka guud
Waxaa aan dooneyn in aan ka ogaano dib u eegista dastuurka waa waxa saxda ah waa awoodaha aqalka sare, balse waxay ila tahay waxay qaadi doonaan xoogaa mas’uuliyadaha ay ilaa iyo hadda ciyaarayeen Madasha Hoggaanka Qaran
S- Waa maxay farriinta aad u direyso dhageystayaasha barnaamijka Tubta Nabadda iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed oo u dabaal-dagay curashada sanadka cusub ee 2017ka?
Marka hore waxaan leeyahay sanad wanagsan. Waxaan rajeynayaa in sanadka 2017ka uu ahaan doono mid wanaagsan. Waxaan dhihi karaa wuxuu ku billawday samaan iyo xumaanka 1dii January Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Ra’isal wasaare Cumar C/rashiid waxay goobjoog ka ahaayen saxiix heshiiskii xabad joojinta ee Galkacyo oo ay gaareen Madaxweynaha Puntland C/weli Gaas iyo Madaxweynaha Galmudug C/karim Guuleed. Maalin kadibna 2dii January waxaa dhacay qaraxyada gaadiid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo sababay geeri iyo waxyeelo aad u badan.
Taas waxay noo muujineysaa Wanaagga iyo xumaanta aan filan karno 2017da balse waxaan rajeynayaa in baarlamaankaan curdunka ah ee haween iyo dhalinyaro badan ku jiraan ay wax ka qaban doonaan xaaladaha Soomaaliya ay wajaheyso.
Taasi waxa ay ka billaabaneysaa wax ka qabashada abaaraha, horumarinta waxbarashada, caafimaadka iyo amniga, ayna cod u noqdaan dalkaan. Qof kasta ha weydiiyo xildhibaankiisa qorshaha waxqabad ee uu Soomaaliya u hayo ama bulshadaada haddii aad ku nooshahay magaalo ama miyi. Aan maalgashano baarlamaanka cusub oo aan xaqiijino in ay wax qabad la yimaadaan laguna taageero
Previous articleUNHCR oo war ka soo saartay halka uu marayo dib u soo cilinta qaxootiga
Next articleDhagayso: Macheal Keating “Isbadel ayaan ka filaynaa Baarlamaanka Cusub”